A practice for progr - Engels - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar:apractice for program auto translation (Engels - Burmees)
In affected areas, most experts recommendapractice known as social distancing.
ကျွမ်းကျင်သူအများစုက ရောဂါကူးစက်နေသော ဧရိယာများတွင် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာနေခြင်းဟု သိထားသော အလေ့အထကို လိုက်နာရန် အကြံပြုထားသည်။
This will be an extra blood sample taken from people who are attending their general practice forascheduled blood test.
ဤသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့် သွေးနမူနာယူစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတို့၏ အထွေထွေဆေးခန်းများသို့ လာရောက်ကြသူများမှ ထပ်ဆောင်း သွေးနမူနာ ရယူခြင်း ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်သွေးစစ်မှု ဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတို့၏ ဆေးခန်းများသို့ လာရောက်ကြသည့် လူနာများကို သွေးရည်ကြည် စစ်ဆေးမှုအတွက် ထပ်ဆောင်းနမူနာ ပံ့ပိုးပေးပါရန် တောင်းဆိုသွားမည်။
ရောဂါပိုးမွှားဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်မှုတွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများအရ ပုံမှန်သွေးစစ်ရန်အတွက် လာရောက်သည့် လူနာများထံမှ သွေးနမူနာများကို အခွင့်သင့်သလို စုဆောင်းရယူမည် ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းသည် အစားအစား ကိုင်တွယ်သူများ သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်သူများအတွက် အထူး အရေးကြီးသော်လည်း အထွေထွေ ပြည်သူလူထုအတွက်လည်း အရေးကြီးသော အလေ့အထဖြစ်သည်။